AbaFarisi | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kungani nani neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu wayala, wathi, Hlonipha uyihlo nonyoko: nokuthi, Lowo oqalekisa uyise noma unina, makafe nokufa. Kodwa nithi, …
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalim…
3. Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo nge…
4. Ingabe abefundisi nabadala ngempela babekwe nguNkulunkulu? Ingabe ukwamukela nokulalela abefundisi nabadala kumele ukuthobela komuntu nokumlandela uNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngakho manje, bheka …
6. Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela …